Makomborero eEECN Broker pamusoro pekubata Dek Brokers | FXCC
Saka chii chakakosha kusiyana pakati pe ECN / STP mutengesi uye kubata madhipatimendi vatengesi, avo vanowanzozonzi "vatengesi"? Takagadzira tafura iri nyore yepros nehana, kuitira kurondedzera pfungwa huru dzekusiyana pakati pe ECN / STP vatengesi uye kushanda dawati / kugadzira vatengesi, asi taifunga kuti tinogonawo kuenda kune imwe nzvimbo yakareba kuitira kuti titsanangure kusiyana uku nekuwedzera.
Pane mutengesi forex mabhizimusi mapurisa, mutengesi anoziva nzvimbo dzako dzakasununguka, maitiro ekutengesa uye mazano uye anogona kushandisa ruzivo urwu kumubatsiro wake.
Pamusoro peFXCC ECN, unogona kutengesa pakarepo pamitengo yakasunungurwa nekutungamirira Financial Institutions.
Zvinyorwa zvitsva zvinowanzoitika mune zvekare zvinotengeserana. FXCC haiti kudzokorora zvakare. Inyanzvi yekambani nekodzero yakasimba / nguva yekubata prototi yakagadzirirwa kuzadza unoshambadzira yako pamutengo wekutengesa.
FXCC haina kutora nzvimbo pamusoro pevatengi vayo zvachose.
Kugoverwa Munguva Yezvemari Releases
FXCC inobvumira vese vatengi pasinei nokuti forex inotengeserana yakakura sei kutengeserana uye kuisa mumitemo mitsva panguva yekubudiswa kukuru kwezvemari. Munguva dzekubudiswa uku, uye pane dzimwe nguva dzisingashamisi pamusika kusagadzikana, bhizimusi / kupa zvinopararira zvakapararira kune izvo zvinowanikwa panguva ye "mararamiro" emusika mamiriro.
Ndeupi mutengesi werudzi iwe?
Chero chero rudzi rwevatengesi iwe unozviona iwe: chikamu nguva, nguva yakazara, kana chido chekutaura uye chero chipi chehuwandu hwehutano hwako pane imwe nguva inoshandiswa pakutengeserana, iyo inofanirwa kune vatengesi vatsva sezvazviri kune vane ruzivo; unyanzvi hwokutengeserana hunowanzobudirira. Vatengesi vanofanira kugara nguva dzose, zvisinei nokuti vane ruzivo rwekutengesa, vanosvika kuranga kwekutengeserana nechisimba chekushingaira nekushanda.
Kusarudza Mutengesi Akarurama ndeyekukosha zvikuru
Mhando yemutengi waunosarudza ndiyo chisarudzo chakakosha, icho chichave chakakonzera zvakanyanya pane zvaunokwanisa kubudirira. Unofanirwa here kusarudza dairy broker broker, kana kuti hapana chaunoshandisa daik broker? Icho chisarudzo chakarurama uye mubvunzo, uye mumwe watichapindura pakarepo. Vanyengeri, vatengesi vakazvipira, avo vakagadzira maonero ehutano uye nzira, vanofanira kungosarudza mutemo weEECN / STP nguva dzose uye ticharondedzera zvimwe zvezvikonzero nei.
Chokutanga, vazhinji vevatengesi veFX vatengesi vemazuva kana vashandi-avo vanogona kutora kubva kumasekondi, maminitsi, kana maawa ava vatengesi vaFX kazhinji havanamatezi maFX usiku hwose. Saka inofanira kunge iri chisarudzo chakanaka chokusarudza kana iwe uchida kunge uchiwedzera kupararira, asi kuripa mutemo pamabhizimisi ose neEECN / STP mutengesi, maererano nekupararira kwakakura uye (inoretically) haibhadhara ma komisi.
Kubata vatengesi vemasikati "vanoita misika", ivo pachavo pamusika. Vane rusununguko rwokutaura ivo pachavo maitiro emhando (zvichienderana neurongwa hwekushanduka kwavo mumamiriro ezvinhu) iyo inogona kusanganisira kuti kuderera kwavo kudii, zvichienderana nehuwandu hwebhizimisi ravari kuita nokuda kwevatengi vavo. Saka zvinyorwa zvadzo ndezvinyorwa zvinyorwa.
Kubata dafura kunopararira kazhinji kunotyisa, iyo inogona kuoneka yakanakisa kana ichitsanangura kupararira kwakagadziriswa, semuenzaniso, imwe pipiro pa EUR / USD. Kunyange zvakadaro, vatengesi vanogona kuve nekusvetuka uye varombo vanozadza, zvinoreva kuti chokwadi ndechokuti ivo vari kuzadzwa kusvika kure nemutengo wekutengesa chaiwo uyo kupararira kune pedo maviri, kana matatu pips pamutengo. Iyo inoshandisa dairy broker inogona zvakare kunonoka kuzadza urongwa muedza kuwana mutengo wakanakisisa wevatengesi.
Zvisinei, nekusiyana kwakanyanya kusiyana pakati pebasa rekwereti nevatengesi uye ECN / STP vatengesi ndiyo iyo inoshandiswa nevashandi vematare echokwadi ari kutarisana nevatengi vavo. Kana iyo inoshandiswa nekombikiti yekodha ichinge yawana saka mutengesi anorasikirwa, ivo vari kutengesa nekushambadzira kumunhu anenge ari muchengeti. Iye zvino apo mhirizhonga inogona kuiswa mberi kuti nemabhadharo makuru ekutengeserana mutengesi wekodzero haisi nekutarisana maererano nemigumisiro, chokwadi ichocho chinoramba chiripo kuti rekodhi rekwereti broker iri kutora mamiriro ekutsvaga kubatsiro kana muchengeti ari kurasikirwa.
NeC ECN / STP muenzaniso kupararira kunoshanduka, zvichienderana nematengesi ezvokwadi panguva ipi zvayo uye zvinyorwa zvakapiwa nevanopa mari; iyo ine mabhandi makuru uye masangano anobatsira kumagetsi akagadzirirwa network. Vatengesi vanobhadhara chikwereti chiduku chekutengesa pamabasa ose uye pane kazhinji hapana maitisi akatengesa. NeC ECN / STP mutengesi vanova bhiriji, dheni pakati pevatengesi nemusika. Mutengesi anonongedza kusvika kumusika kuburikidza nemagetsi akagadziriswa nzvimbo yemisika pasina chibvumirano, hapana kupindira uye hapana kupindira. Mitengo inouya kubva mumatareji, dziva rekudzivirira rakagadzirwa nevari kupa.
Neye ECN / STP mufananidzo hapasati wambokodzokorora zvakare, mirairo yose yakazadzwa nemutengo wakakosha chero nguva ipi zvayo. Pane dzimwe nguva zvinyorwa izvi zvinogona kunge zvakakosha zvakakosha, zvakaderera sezana shoma pipipu, zvichida 0.1 zvichienderana nehuwandu hwebasa mukati meEECN uye izvo zvinotiendesa kune rimwe ruzivo rukuru rwekutengesa kuburikidza neEECN / STP mutengesi; kudzika kwemashamba.